Mudane Madaxweyne Labadan Talaabo Qaad Waa Hubaal Inay Xasili G. Bariguye – somalilandtoday.com
Mudane Madaxweyne Labadan Talaabo Qaad Waa Hubaal Inay Xasili G. Bariguye
Marka hore ilaahay subxaanuhu watacaalaa ayaa mahad leh inaga dhigay ummad islaam ah oo inaga fadilay dhammaan makhluuqaadkiisa badan ee kala duwan ee uu aduunka guudkiisa ku abuuray haddana inagu sii sharfay Islaamnimo taas oo ah nimcada ugu wayn ee ilaahay subxaanuhu wa tacaalaa uu bixiyo inta dunida la joogo taas oo aan ku mutaysan doono nolol dambe oo aan dhamaad lahayn Inshaállah Alxamdulilah.
Haddii aan u soo daadego nuxurka iyo ujeedada qoraalkaygan, waxaan jecelahay inaan xukuumada iyo madaxweynaha qaranka Somaliland aan la wadaago qormadan kooban oo talo soo jeedin ah, mudane madaxweyne sidaynu og nahay Awooda xukuumada ama dawladnimada Somaliland waxay aad uga shaqaysaa gobolada
galbeedka Somaliland si aanay uga shaqaynin gobolada bariga Somaliland!
Mudane madaxweyne sidaan ka war qabto goboladaa bariga waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo ay qabaan bulshada goboladaasi ku nooli mid amni iyo mid dhaqaale iyo waxbarasho iyo horumarineedba inta way tabayaan ha ugu waynaato tabitaanka ay tabayaan maamul xoogan oo ka shaqaqeeya goboladoodaase.
mudane madaxweyne sidaan ka war qabno goboladaa bariga waxaa ka jira oo mar walba ka dhaca shaqaaqooyin badan oo soo noqnoqda mar walba oo nafo badana galaaftay si kasta ha ku dhacaane, shaqaaqooyinkaasi mar walba waxay galaaftaan nafo badan kuwa kalena way barakiciyaan taasi oo aan ahayn wax aan loo dul qaadan karin maadaama oo aynaan u baahnayn in cid dambe dhexdeena inagaga dhimato si macno daro ah.
mudane madaxweyne dhibaatada ugu weyn ee haysata gobolada bari waa laba arimood waxaana ka kaw ah dawlad iyo maamul xoogan oo aan ka jirin deegaanadaas iyo hub badan oo si bilaa sharci ah loogu haysto guri walba hubkaasi kuma koobna oo kaliya qori iyo rasaas balse waxaa jira hub tikniko ah sida imika iyo marar badanba dhacda isku adeegsiga hubkaasi taasna waxaa kuu cadaynaya dhimashada deegaanadaas ka dhacaa intay leeg tahay! Mudane madaxweyne waxaan kuu soo jeedin lahaa laba arimood inaad ku dhiirato waa ta koowaade inaad maamul daadajin aad ku samayso xukuumadaada inaad xarumaha wasaaradaha iyo waaxyaha qaar aad gayso gobolada bariga si maamul iyo dawladnimo xoogan ay uga dhalato gobolada bariga oo ay xasilaan sida gobolada galbeedka.
mudane madaxweyne shaqaaqooyinka badan ee ku salaysan beelaysiga ee inagu soo noqnoqday dadaka badna inaga galaaftay waa in arintaas xal laga gaadho oo gacan bir lehna lagu qabto si aanay mar dambe inoogu soo noqnoqonnin cid dambena inagaga dhimanin si macno daro ah.
mudane madaxweyne inaad hubkaa la isku gumaadayo ee sida bilaa sharci darada ah loo haysto aad ka soo ururiso bulshada uu gacanta ugu jiro taa bedalkeedana aad gacanta dawlada soo galiso qofkii hub sharci daro ah oo dambe lagu qabtana sharciga la horkeeno laguna qaado ciqaabta uu mutaystay in qofkii qof dila markaaba la soo qabto sharcigana la horkeeno laguna fuliyo dambiga uu gaystay si aanay dhib kale u dhicin kuwa ka dambeeyaana ugu quustaan.
hub kasta iyo gaadhi kasta oo loo adeegsado dagaal si bilaa sharci ahna loo haysto waa inay xukuumadu la wareegto dadkii lagu qabtana sharciga la horkeeno.